Isipaji sedijithali kunye nexesha elizayo leentlawulo | Martech Zone
Ngo-2011, inani lentengiselwano yentlawulo ephathekayo iya kuthi ifike kwi-241 yezigidigidi zeedola kodwa ngo-2015, kulindeleke ukuba idlule kwi-1 trillion! Alithandabuzeki elokuba yiyo yonke inkampani yamakhadi etyala kunye nesango lokuhlawula kwi-intanethi kunzima emsebenzini ukutyala amakhulu ezigidi zeedola Kufuphi neNxibelelwano lweeNdawo Itekhnoloji kunye neendlela zokuhlawula.
Ngokwanda kothungelwano lwebhendi ebanzi kunye nezixhobo eziphathwayo, indlela esihlawula ngayo izinto kulindeleke ukuba itshintshe kakhulu kule minyaka imbalwa izayo. Sivela kwiigobolondo kunye neentsimbi kwimali yamaphepha kwikhadi lekhredithi elikuyo yonke indawo kwithuba lamawaka ambalwa eminyaka.
tags: isikhwama sedijithaliiintlawulo mobilekufutshane nonxibelelwano lwentsimiNFC
Ukujongwa kwangaphakathi kwiNkqubo yokuThengisa nge-imeyile kunye neeNkonzo
Imbali yemiyalezo ebhaliweyo